Wordpress 3.0 Zvimiro | Dhizaini yeWebhu | Denderedzwa
Mugovera, June 12, 2010 China, Gumiguru 29, 2015 Lorraine Bhora
Ini handisi techy nekudzidzira kana hunhu, saka ndinogara ndichitsvaga maturusi anondibvumidza kutamba munharaunda yehunyanzvi. Makore maviri nehafu apfuura, ini ndakawana WordPress, uye kwandiri yaive mutambo wekuchinja.
Tichishandisa WordPress senge zvemukati manejimendi sisitimu, tinogona kugadzira, kutaridzika kwenyanzvi, nyore kushandisa mawebhusaiti kune edu madiki emabhizimusi vatengi. Iyo inogara ichikura runyorwa rwema plugins yakatibvumidza isu kuti tigadzire akawanda uye akasimba nzvimbo saiti, ine maficha akafanana neyakajairika-akagadzirirwa masosi anowanikwa pamatanho akakwirira epamusoro emapoinzi. - Saka kuzviisa zvinyoro, ini ndiri WordPress fan.
Nechekuvandudza kwega kwega, kune akawanda uye akawanda maficha anoita kuti basa rangu rive nyore uye kurerutsa hupenyu hwevatengi vedu. Saka zvino, WordPress 3.0 yakarongerwa kuburitswa neMuvhuro. Iyi vhezheni itsva ichave iri nani zvakadii? Mishumo yekutanga kubva kuBeta testers inoratidza kune zvimwe zvinhu zvinotyisa.
Tsika Dzemhando Mhando: Mune vhezheni yekare iwe unogona kugadzira zvinyorwa uye mapeji, ikozvino unogona kugadzira mamwe mafomati emhando dzeruzivo, zvipupuriro, maFAQ, vatengi kana maprofayiri evashandi, iro runyorwa rwezvinhu zvakareba sekureba mhando dzekambani dzinogona kuishandisa.
Munyori Zvinyorwa: Pamazhinji vanyori mablogiki senge aya, munyori wega wega anogona kuve neayo "maitiro" avo. Nepo varidzi vesaiti vachiri kungotonga pane zvese zvinotaridzika uye vanzwe kuchengetedza brand kuvimbika, izvi zvinofanirwa kubvumidza humwe hunhu kuti huuye kuburikidza. Ndiri kunyatsofara nezve ichi chakasarudzika chimiro cheiyo denderedzwa blog sezvo nhengo yega yega yechikwata changu inotanga kunyora zvirimo uye zvirimo.
Menyu Management: Mune vhezheni yechinyakare, kurongedza mapeji uye mashoma mapeji aifanirwa kutarisirwa mukati mega posvo. Kuwedzera peji kwaive nyore, asi kuiisa munzvimbo chaiyo pakufamba kunogona kurwadza, kunyanya kana iwe uine akawanda mapeji. Kuva nechimwe chikuru
Sidebar Footer Widgets: Isu tinogara tichishandisa Studio midhiya madingindira nekuda kwechinhu ichi chinotibvumidza kuti tigadzire zvemukati zvakapfuma tsoka dzinoonekwa pane yega peji. Ndiri kufara kuona izvi zvichisanganisirwa mu3.0 seyakajairwa.
Kubatanidza Saiti Saiti uye Multisite: Nepo vatengi vangu vasina hanya, uku kuchave kuvandudzika kukuru kwatiri, apo patinowedzera mamwe masayiti. Kuchinjira kumhando yeMU kunotibvumidza kuti tivandudze plugins uye zvemukati kamwe chete, kwete kakawanda!
Kune zvakawanda zvakawanda zvinonakidza maficha neiyi yekuvandudza! Ini handigoni kumirira kuti ndiedze vese. Ungafarire kuziva zvaunoda zvakanyanya paunotanga kushanda newest vhezheni.
Tags: zvinyorwa zvemunyorimenyu manejimendimultisiteWordPresswordpress 3wordpress 3.0
Jun 12, 2010 pa10: 03AM
* DONT_KNOW * Zvichava zvinonakidza kuona kuti ndeipi 'flavour' yeMU yavanobatanidza. Multi-domain yakanga isiri chinhu chakakosha cheMU uye zvainetsa kuita (isu takaita 14 saiti kuitisa) uye zvimwe zvezvinhu zvacho zvainge zvisina kutsetseka (sekumisa plugins kune ese network hakuna kumboita kunge kuri kushanda). Ini ndaizoyambira pamusoro pekushandisa MU kubata vatengi vazhinji panguva imwechete, zvaizoda kuti iwe utamise VATengi vatengi muchiitiko chekuti mumwe aida kutamirwa kune inokurumidza server nharaunda, kana ivo vaida pakupedzisira kuitisa yavo vega.